Food, Drink & Recipes » အပေါ်ဖြူး – Topping	28
သုပ်နည်းကတော့ ဒီမှာရေးထားတယ်။ http://mandalaygazette.com/199829
မုန့်ဟင်းခါး (သို့) မုန့်ဟင်းငါး ဒါကတော့ ဘာကိုခေါ်မှန်း ရှင်းပါတယ်။ ဒါတောင် မုန့်ဟင်းခါး စားတယ် နဲ့ မုန့်ဟင်းခါး သောက်တယ်မှာ ကွဲကြသေးတယ်။
ချက်နည်းတွေက ဒီ မှာရှိပါတယ်။ http://mandalaygazette.com/205350
ချက်နည်းက ဒီမှာကြည့်။ http://mandalaygazette.com/218539
လုပ်နည်းတွေကတော့ ဒီမှာကြည့်ပါ ခညာ။ http://mandalaygazette.com/212175
သုပ်နည်းက ပို့(စ) တင်ဖူးတာ ဒီမှာ http://mandalaygazette.com/161517
Kaung Kin Pyar says: ခေါက်ဆွဲသုပ်ကတော့ အချဉ်ရည်က အဓိကပဲထင့်…။ မွေ့သုပ်ကျွေးသမျှ..အိမ်ကခေါက်ဆွဲသုပ် လှည့်ကိုမကြည့်သလောက် အပြင်မှာ သူမသိအောင် ဆိုင်တကာလှည့်ပတ်စားနေတာ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီထဲမှာ ရှိတယ် ကင်းကောင်လေးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: နန်းကြီးသုပ် ကြိုက်တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မန္တလေးမြီးရှည်
ပြီးရင် ကော်ရည်ဆမ်းတယ်။ပဲငပိထည့်တယ်။ နံနံပင်ကြက်သွန်ဖြူ ဖျော်ထားတဲ့ အရောထည့်တယ်။ စားသုံးသူစိတ်ကြိုက် ဆီနီ၊ဆီဝါ၊ ဆား၊အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးကြော်ထည့်တယ်။ ဂျုံကြော်ထည့်တယ်။ ဟင်းရည်အိုးထဲပြုတ်ထားတဲ့ ၀က်သား၊ကြက်သားတုံးများကိုဆယ်ပြီး ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ထည့်တယ်။ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ အသားပြုတ်ဟင်းရည်၊ မုန်ညင်းချဉ်၊မုန်လာချဉ်တို့နဲ့တွဲဖက်စားစရာ မန္တလေးမြီးရှည်သုပ်တစ်ပွဲရလာပြီပေါ့။ မြီးရှည်ကြိုက်တတ်သူတွေဟာ မြီးရှည်စားမယ်ဆို တစ်ခါတည်း နှစ်ပွဲ မှာထားရတယ်။ တစ်ပွဲပြီးမှ နောက်တစ်ပွဲစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက်မှထပ်မှာရင် တမေ့တမော စောင့်နေရတာနဲ့ အစာအိမ် လေခံသွားနိုင်တယ်။
မန္တလေးမြီးရှည်ကတော့ မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေသာမက တခြားမြို့ကလူတွေပါ မန္တလေးရောက်တိုင်း စွဲစွဲမက်မက်စားကြတဲ့ အစားအစာပါလို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ Credit to ယဉ်ယဉ်နှောင်း
Mr. MarGa says: ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လိုမှ ရှာမရလို့ ငတ်နေတယ် :'(
ဇီဇီခင်ဇော် says: မန္တလေးမုန့်တီ
မန္တလေးမှာ မုန့်တီ ထွန်းကားလာလိုက်တာ မုန့်တီလုပ်ရောင်းပြီး နာမည်ကြီးလာတဲ့နေရာကို မုန့်တီတန်းဆိုပြီး ရပ်ကွက်ခေါ်ရတဲ့အထိပါပဲ။ မုန့်တီတန်းရပ်ကွက်ဟာ ၃၂လမ်း-၃၃လမ်းကြား၊ ၇၃-၇၄ကြားမှာရှိပါတယ်။ မန္တလေးမုန့်တီမှာ မုန့်ဖတ်ကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အသေးဆုံးက နန်းသေး။ အချင်း ၂ မီလီမီတာလောက်။ သူကအရွယ်သေးလွန်းတော့ မုန့်ဟင်းခါး၊ရခိုင်မုန့်တီတို့လို အရည်တွေနဲ့ စားဖို့လောက်ပဲကောင်းပြီး နယ်ဖတ်စားရတဲ့ မုန့်တီဖတ်အဖြစ်သုံးဖို့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ နည်းနည်းကြီးတာက ခိုတောင်နန်း။
သူ့အချင်းက ၃မီလီမီတာလောက်။ခိုတောင်မုန့်တီက ခိုတောင်နန်းနဲ့ သုပ်မှ ပိုစားကောင်းတယ်။ နန်းလတ်ကတော့ မြီးရှည်သုပ်တဲ့နန်းလိုအရွယ်မျိုးဖြစ်ပြီး တယ်လီနော ကြော်ငြာထဲမှာ နန်းကြီးသုပ်ဆိုပြီးပြသွားတာ နန်းလတ်သုပ်ကြီး။
သူ့အချင်းက ၅မီလီမီတာလောက်။ မန္တလေးမှာတော့ မုန့်တီသုပ်တစ်ပွဲလို့ မှာလိုက်ရင် ဒီလိုနန်းလတ်မျိုးနဲ့ပဲ ချပေးတာများတယ်။ နန်းကြီးကတော့ အကြီးဆုံးပဲ။ အချင်း ၁စင်တီမီတာနီးပါးရှိတယ်။ တခြားမြို့က လူတွေက မန္တလေးလာပြီး နန်းကြီးသုပ်လို့မှာလိုက်တဲ့အခါ ဒီလို လက်သန်းလုံးလောက်နန်းကြီးနဲ့သုပ်ပေးတာမြင်ရင် မျက်လုံးပြူးကုန်ကြတာပဲ။ တကယ်တော့ ဒါကမှ နန်းကြီးအစစ်ပါ။ နန်းကြီးသုပ်ကတော့ မုန့်သားပိုထူတဲ့အတွက် တစ်လုပ်စားလိုက်တိုင်းမှာ အရသာပိုဆိမ့်သလိုရှိပါတယ်။
မန္တလေးမုန့်တီမှာ အဓိကအကျဆုံးက ဟင်းအနှစ်နဲ့ ပဲမှုန့်ကောင်းဖို့ပါပဲ။ ပဲမှုန့်ကောင်းမှ မုန့်တီအရသာစစ်စစ်ပေါ်ပါတယ်။ အသားကတော့ ကြက်၊ ငါးဖယ်အပြင် အမဲကြောနဲ့လည်း သုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။ မန္တလေးမှာ မုန့်တီသုပ်စားမယ်ဆို နာမည်ကြီးဆိုင်တွေကတော့ 1)စိုးစိုးမုန့်တီ ၃၁-၃၂ကြား၈၄-၈၅ကြား။
မန္တလေးမှာ မုန့်တီဟာ နံနက်စာအဓိကရောင်းတာမို့ မုန့်တီစားချင်ရင် နေမမြင့်ခင်သွားစားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ မုန့်ကြွပ်ကြော်မွှေးမွှေး၊ ပဲမှုန့်နံ့သင်းသင်း၊ ဆီရွှဲရွှဲနဲ့ မန္တလေးမုန့်တီတွေဟာ မန္တလေးရဲ့ နံနက်စာစာရင်းမှာ အမြဲတမ်း ထိပ်ဆုံးက နေရာယူလျက်ပါပဲ။
kai says: ပြောလို့သာ..ပြောတာ…
ပီဇာတို့တော့ပင်လောက်တော့.. သနားတယ်ပေါ့…။ ဆိုတော့…
kai says: လုံလောက်ပါတယ်…။
မုန့်ဟင်းခါးထဲ.. ချိစ်အတုံးတော့ပင်လေးတွေထည့်ပြီး.. စင်္ကာပူလို့နာမယ်ပေးပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
kai says: http://www.cheaprecipeblog.com/2014/09/80-creative-soup-toppings/
kai says: အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲမှာ..အဲဒီပုံကလို.. နို့စိမ်းနဲ့အရုပ်ရေးနိုင်ရင်..မဆိုးဘူး..။
kai says: စကားအတင်းစပ်..
??မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည် ငါးခူ ( သို့) ငါးကျီး ကို စပလင် နနွင်း ငံပြာရည် ဆား ထဲ့ ပြုတ်ပါတယ် ငါးကို အသားနွင် , အရိုးကို ထောင်းရေဖျော် ဇကာနဲ့စစ်ထားပါတယ် ( အရည်မည်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါ) ကြက်သွန်ဖြူနီ ဘတ်လတ်ထောင်း ဂျင်းအနည်းငယ် နဲ့ ဆီပါလေကာနဲ့ ဆီသတ်ပါ ( ထောင်းထားတဲ့ ပြုတ်ရေထဲ့) ရေလိုသလောက်ထဲ့ ပြုတ်ရေကျအောင်တည်ပါတယ် … ကြက်သွန်နီ ဥသေးခွာပြီးထဲ့ပါတယ် ဆန်လှော် ထောင်း ဟင်းရည် အရမ်းပွက်ရင် အနည်းငယ်ထဲ့ပါတယ်
အရသာမြည်း ပြီးလိုတဲ့ အရသာထဲ့ ဟင်းရည်အိုးရပါပြီ .. ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ( တောင်ငူက မှာပါတယ်)
ပဲကပ်ကြော် ( တောင်ငူက မှာပါတယ်) ??တောင်ငူမုန့်တီသုပ်
မုန့်ဖတ်ထဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး ပဲသီး နံနံပင် ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ငြုပ်သီးမှုန့် ပဲကြော် ချေထဲ့ ဟင်းရည်ကြည် အနယ်ငယ်ထဲ့ အရသာထဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီကျက်ထဲ့ စေးစေးလေး သုပ်ပါတယ် ??တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး ရေဖျော်
မုန့်ဖတ်ထဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး ပဲသီးနံနံပင် ကောက်ညှင်းဆန်လှော်မှုန့် ငြုပ်သီးမှုန့် ပဲကြော်ချေထဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီကိက်ထဲ့ အရသာထဲ့ ဟင်းရည် ထဲ့ပါ တယ် ??တောင်ငူမုန့်ဖတ်က အနည်းငယ် အလုံးတုတ်ပါတယ် (ချက်နည်းကွဲပြားမှု့များရှိနိုင်ပါသည် တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ အိမ်က ပြောပြသလောက်ဖြင့် ချက်ပါတယ် ) ‪#‎Ericmoon‬
Alinsett @ Maung Thura says: မွင်းငါးကို ပဲပင်ပေါက်တွေ ထည့်စားတတ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကို သတိရသွားတဲ့အပြင်
အဓိက ပြောချင်တာကတော့ .
kai says: ဟိုတနေ့ကပဲ.. ဖွေးဖွေးကို.. ဓာတ်ပုံရိုက်လာသေး…။
Courage says: ငတ်နေပါတယ်ဆို စားစရာစရာတွေအကြောင်းပဲ တင်တင်နေတယ်… ဂယ်ပဲ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: တညား တခြားအကြောင်းတွေ တင်တုန်းက မောင်ကာကြီးက ဘယ်ရောက်နေတာတုန်း
ムラカミ says: မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်းလား…
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိ ပြောတော့ နာ့ ကို စမ်းချောင်း မွင်းငါး ကျွေးမယ် ဆိုပြီးးး
Mike says: .နန်းကြီး၊ နန်းပြား သုတ်ကြိုက်မှကြိုက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခိ။
kai says: ဒီလ ဒါကိုထည့်လိုက်ပြီ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်၊.
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: ရှမ်းမြောက် မုန်းခိုမှာ ကိုးကန့်တွေစားတဲ့ ချေးဆီ ထမင်းကြော်အကြောင်း ရေးပေးမယ်အေ …. အဆင်တဲ့ရင် ကမ္ဘာကျော်မဲ့ အစားအစာ